Mazdakisma - Wikipedia
Ny mazdakisma dia fivavahana gnôstika izay niavaka tamin'ny fanafoanany ny fananan-tsamirery fa nanandratra ny fananana iombonana (mpialoha lalana ny kômonisma), izay niseho tamin'ny faramparan'ny taonjato faha-5 sy ny fiandohan'ny taonjato faha-6. Nipoitra avy tamin'ny zôrôastrisma ny mazdakisma. Avy amin'ny anaran'ilay mpiaro azy io anarana io, dia i Mazdaka (Mazdak).
Sahala amin'ny mazdeisma sy ny manikeisma izay fivavahana doalista ny mazdakisma. Inoany ny fisian'ny foto-javatra roa: ny Tsara (Fahazavana) sy ny Ratsy (Haizia). Ny fifangaroan'ireo foto-javatra ireo tsy nahy no niteraka an'izao rehetra izao. Izay ataon'ny manikeisma ho zava-doza dia heverin'ny mazdakisma azo raisina amin'ny lafiny tsara.
Manompo ny andriamanitry ny Fahazavana, izay monina any amin'hy Paradisa any an-Danitra, ny Mazdakista. Misy viziry, izay mifanandrify amin'ireo "planeta" fito fantatra tamin'izany fotoana izany, manampy an'io andriamanitra io. Manampy azy koa ny "zavatra ara-panahy" roa ambin'ny folo izay mifanandrify amin'ireo evan'ny zôdiaka roa ambin'ny folo.
Misy hery efatra avy amin'ny ansdriamanitry ny Fahazavana: ny fandrenesana, ny fahalalana, ny hafaliana ary ny fitadidiana. Ny olona rehetra dia heverina fa manana an'ireo hery efatra ireo ka tokony hampiely ny fahazavana manerana ny tany, izany hoe hanao ny Tsatra sy hanana fitondran-tena tsy misy hokianina. Izany olona izany dia tokony hanaja ny hafa, hiala amin'ny adiady amin'ny hafa, hanampy ny mitady izany, tsy manao izay hampanan-karena amin'ny fanambakana ny hafa. Avy amin'izany finiavana izany ny hevitra ny amin'ny fanitsiana ara-piarahamonina asandratr'i Mazdaka.
Fivavahana iraniana[hanova | hanova ny fango]
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Mazdakisma&oldid=997298"
Voaova farany tamin'ny 21 Septambra 2020 amin'ny 14:01 ity pejy ity.